धनी अमेरिकीको सूचिमा जेफ बजोसनै पहिलो, कसको पम्पति कति ? « Pen Nepal
धनी अमेरिकीको सूचिमा जेफ बजोसनै पहिलो, कसको पम्पति कति ?
Published On :9September, 2020 7:55 am By : पेननेपाल
एजेन्सी । अमेरिकी धनीहरूको सूचिमा लगातार तेश्रो वर्ष पनि पहिलो नम्वरमा अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस रहेका छन् । धनी अमेरिकीहरूको फोब्र्सको सूचिमा बिल र मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनका बिल गेट्स दो।ो स्थानमा छन् । ४०० धनी अमेरिकीको सूचिमा सात जना भारतीय मूलका अमेरिकी पनि सामेल छन् ।
कोरोना महामारीको यो समयमा पनि अमेरिकी धनीमानीको सम्पति बढेको बढ्यै भएको देखिएको छ । सूचिमा समेटिएका ४०० जनाको जम्मा सम्पति ३२ अर्ब डलर छ । गत वर्षभन्दा यो २४० अरब डलर बढी हो । फोब्र्सकाअनुसार सर्वाधिक धनी जेफ बेजोसको कुल सम्पति १७९ अरब डलर छ भने दोश्रो नम्वरमा रहेका बिल गेट्सको सम्पति १११ अरब डलर रहेको बताइएको छ ।
यो सूचिमा फेसबुक स.स्थापक मार्क जुकरबर्ग ८५ अर्ब डलरको सम्पतिसहित तेश्रो स्थानमा छन् । वर्कशायर ह्याथवेका सिइओ वारेन वफे चौथो स्थानमा छन्, उनको सम्पति ७३.५ अर्ब डलर बताइएको छ । सफ्टवेयर कम्पनी ओरेकलका सस्थापक ल्यार िएलिसन ७२ अर्ब डलरकासाथ पाँचौ स्थानमा छन् भने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नाम ३३९ औं सथानमा छ । ट्रम्पको कुल सम्पति २.५ अर्ब डलर रहेको उल्लेख छ ।
अफगान सर्वोच्च अदालतका दुई महिला न्यायाधीशको गोली हानी हत्या
एजेन्सी । अफगानितानमा सर्वोच्च अदालतका दुई महिला न्यायाधिसको गोली हानी हत्या भएको छ । अधिकारीले